Wadahalada waqooyiga Soomaaliya "Somaliland" iyo Koofurta Soomaaliya (Talo kooban) - Caasimada Online
Home Maqaalo Wadahalada waqooyiga Soomaaliya “Somaliland” iyo Koofurta Soomaaliya (Talo kooban)
Wadahalada waqooyiga Soomaaliya “Somaliland” iyo Koofurta Soomaaliya (Talo kooban)
Sida aan badankeenu ka warqabno waxaa waayadaan danbe, socday wadahadalo qiimo leh, una dhaxeeya Waqooyiga Soomaaliya “Somaliland” Iyo KoofurtaSoomaliya, wadahaldaas oo ay hormuud ka tahay Dowladda Turkiga, ayaa kulankii ugu danbeeyay dhacay bishii April 2016, In kastoo ay u muuqatay in qodobadii ugu muhiimsanaa hal qodob kamid ah ay isaga soo dhawaadeen labada dhinac, qodobkaasna waxa uu ahaa in marka hore maamulada Ka jira koofurta Soomaaliya ay soo midoobaan, yimaadaan miiska wadahalada ayagoo mid ah kuna midaysaan hal maamul.
Waxaa kaloo jirta Hay’ad madax banaan oo qayb ka ah wadahadalada laguma magacaabo Canter for Foreign Policy and Peace Research of the Ihsan Dogramaci Peace foundation kana howl gasha dalkaTurkiga, oo la timid fikirka in si qoto dheer loo aruuriyo qodobada ugu waa wayn ee laysku mari la’ahay. Hay’ada waxa ay codsatay Aqoonyahano ka madax banaan wasiirada labada maamul oo laakiin fikir ahaan kala aamin san midnimo Iyo gooni isu taag in ay si kooban usoo bandhigaan aragtiyaado ku kala aadan arrimahaasi iyada oo laga codsaday in ay sabab u yeelaan aragtitooda ku kala aadan midnimada Somalia iyo gooni-isu-taaga. Waxaa kaloo dhinac socday kulumo gooni gooni ah marna si guud ay wadayeelenayeen Wasiirada, ayaa waxaa ay u muuqdeen in dhinac waliba jirto meel ama xad uu san dhaafi karin, sidaa darteed waxaa cad in aysan jirin dhinac u madax banaan in ay gaaraan go’aan cusub Intaas waxaa dheer in dhamaan wafdiyadda guud ahaan ay kala wateen qodobo aan marnaba isku dhinac u socon.
Sida uu hadda ka hor Sheikh Mustafa Ismail sheegay ‘’Midoobida Soomalida Waxaa ka horeeyay in Caloosha isu bugta la daweeyo’’ Muxadaradiisii ahayd ‘’Qalbiga Saafiga ah’’ https://www.youtube.com/watch?v=e6rMyjTLwUc&feature=youtu.be
In marka hore la raadiyo wadooyin ka duwan wadadii hore. oo laysku keeno Guurti ama Nabadoono ka socda labada dhinac, lana furaa dibuhishiisiin dhab ah (Reconciliation).
Xubnaha Guurtida ama Nabadoonada metelaya labada dhinac waa in ay ahaadaan kuwo lagu yaqaano wanaag isla markaana, khibaradna uleh Bulshada.
Goobta laysugu keenayo waa in ay noqoto labada dhinac meel kamid ah.
In labada dhinac ay ogolaadaan , in marka hore la dhagaysto dhinaca wax tabanayo.
In Lagu fakaro habkii loo daaween lahaa Dhinaca wax tabanayo.
In is Cafis Guud la helo.
Markii la helo dibuhishiisiin caam ah, ayaa lafuri karaa mida siyaasadeed. Waxaa kaloo asaas u ah wadahalada in lagu soo daro bulshada qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan culumada Soomaliyeed.
For any further questions, you contact me via email:
W/Q: Mohamed Isse Mudey